San Htun's Diary: ဖီလာဒဲဖီးယားသွား တောလား...
မေ ၂၆ မမ်မိုရီယမ်ဒေး ခရီးသည် ၄၅ ကို တင်ဆောင်လာတဲ့ တိုးကားဟာ မနက် ၇ နာရီမှာ နယူးယောက် မက်ဟန်တန်ကနေ စတင်ထွက်ခွာပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ အတူထိုင်တဲ့သူက ဂျူလီယာ အသက် ၈၀ စပိန်ကနေ နယူးယောက်ကို တယောက်တည်း တိုးရစ်တဲ့ အာဂအဘွား။ တိုးရစ်တွေက အမေရိကန်၊ အီတလီ၊ ဘရာဇီး၊ ပေါ်တူဂီ၊ စပိန်တွေမို့တိုးဂိုက် ၂ ယောက်က အင်္ဂလိပ်၊ အီတလျံ၊ စပိန်၊ ပေါ်တူဂီ ဘာသာလေးမျိုးနဲ့ရှင်းပြပါတယ်။ တရုတ်တိုးကား ၃ စီးတောင်တွေ့ တယ်။
တနေ့ ကို ကားစီးရေသိန်းကျော်ဖြတ်ပြီး အမြဲကျပ်ညှပ်နေတတ်တဲ့ လင်ကွန်းမြေအောက်လှိုဏ်ခေါင်းမှာ ကားတွေရှင်းလို့ ။ မက်ဟန်တန်ကနေ နယူးဂျာဆီဖက်ကို လင်ကွန်း Lincoln ၊ ဟော်လန် Holland မြေအောက်လှိုဏ်ခေါင်း ၂ ခု၊ ကွင်းဖက်ကို ကွင်းမစ်တောင်း Queens Midtown မြေအောက်လှိုဏ်ခေါင်းတွေ ရှိပါတယ်။ နယူးယောက်ပြည်နယ်က မက်ဟန်တန်၊ စတေးတန် Staten ၊ ဘရွှတ်ကလင်း Brooklyn ၊ ကွင်း Queens တို့ ရှိတဲ့ လောင်းအိုင်းလန် Long Island ကျွန်းတွေနဲ့ဖွဲ့ စည်းထားပြီး နိုင်အာဂရာရေတံခွန်၊ Lake Erie ၊ Lake Ontario တွေကို ကနေဒါနဲ့တခြမ်းစီ ခွဲဝေပိုင်ဆိုင်တဲ့ အရှေ့ မြောက်ဖက် ပြည်နယ်တစ်ခုပါ။ နယူးယောက်ပြည်နယ်မြို့ တော်က အယ်ဘနီ Albany ဆိုပေမဲ့ နယူးယောက်မြို့ က ယူအက်စ်ရဲ့လူဦးရေအထူထပ်ဆုံးမြို့ ။ လူဦးရေ ၈.၄ သန်းကျော်ရှိပြီး နယူးယောက်ပြည်နယ်ရဲ့လူဦးရေ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းက နယူးယောက်မြို့ ကပါ။
နယူးယောက်ပြည်နယ်ကို NY လုို့အတိုကောက်ခေါ်တာမို့ကွဲပြားအောင် နယူးယောက်မြို့ ကို NYC လို့ခေါ်ပါတယ်။ Big Apple ၊ The city that never sleep လို့ လည်း တင်စားကြပါတယ်။ စီရေတယ် Seatle မြို့ ရှိတဲ့ ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်နဲ့ကွဲပြားအောင် ယူအက်စ်မြို့ တော်ကို ဝါရှင်တန်ဒီစီ Washington, D.C (District of Columbia) လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ အံ့သြစရာ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေကို ကနေဒါနိုင်ငံ မြို့ တော်နာမည်ကိုမေးတော့ ဆောရီး ကနေဒါဆိုပြီး မသိကြတာများတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း တိုရန်တိုလား Toronto ၊ ဗန်ကူးပါးလား Vancouver မရေရာ မသေချာ။ အဖြေမှန်ကို တယောက်က မဆိုင်းမတွ အသေအချာ ဖြေသွားတယ် အော်တိုဝါ Ottawa တဲ့။ ကနေဒါနိုင်ငံသားလားမေးတော့ ဟုတ်တယ်တဲ့။
လှိုဏ်ခေါင်းကနေ ထွက်လိုက်ရင်ပဲ နယူးဂျာဆီပြည်နယ်ကို ရောက်ပါပြီ။ နယူးဂျာဆီပြည်နယ်က ဒီစီ District of Columbia၊ ဒယ်လဲဝဲယား Delaware ပြည်နယ်တွေလို သေးငယ်ပါတယ်။ ၁၇၄၆ ကတည်းက ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ ပရင်စတန် Princeton တက္ကသိုလ်ဟာ ဟားဗတ်၊ ရေး Yale ယူနီဗာစတီလို ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တခုပါတဲ့။ ပရင်စတန်တက္ကသိုလ်ထွက်တွေက နိုဗယ်ဆုရတဲ့သူ၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေတွေမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့သူတွေပါတဲ့။ ဖီလာဒဲဖီးယားကို နောက်ထပ် ၂ နာရီလောက် မောင်းရမှာမို့ရောက်ခါနီးမှ နိုးပါမယ်တဲ့။ အဲဒီ ၂ နာရီအတွင်း ဂျူလီယာနဲ့စကားတွေ ပြောကြတယ်။
စပိန်မှာမွေး အင်္ဂလန်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ဂျူလီယာဟာ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးနဲ့အိမ်ထောင်ကျပြီး သားတစ်ယောက်၊ သမီးတစ်ယောက်ရပါတယ်။ ပင်စင်ယူတော့ စပိန်တောင်ပိုင်းမှာ အိမ်ဝယ်ပြီး ခုလက်ရှိအထိ နေထိုင်တုန်းပဲ။ ဘာလို့စပိန်မှာ ပင်စင်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်တာလဲမေးတော့ သူ့ အမျိုးသားက စပိန်ကို ကြိုက်တယ်၊ ရာသီဥတုလည်း ကောင်းတယ်။ အင်္ဂလန်မှာဆို အမြဲမိုးရွာပြီး မှုန်မှိုင်းနေတာပဲ။ သူ့ မြေးမလေး အဲဒီဒေသကို ဟန်းနီးမွန်းသွားတော့ သဘောကျလို့သူ့ အဘိုးအဘွားကို သွားလည်ဖို့တိုက်တွန်းရာက အိမ်ဝယ်ဖြစ်သွားတယ် ဆိုပဲ။ သူ့ သမီးက အင်္ဂလန်မှာ၊ သူ့ သားက ဂျာမနီမှာ၊ သူက စပိန်မှာ။ သူ့နယူးယောက်သွားမဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို သားက ပေးတာတဲ့။ သူတို့ မိသားစုတွေက တယောက်တနေရာစီ အဝေးမှာ ဆိုပေမဲ့ သိပ်ချစ်ကြတယ်ဆိုပဲ။ အမြဲ ဖုန်းဆက်ကြတယ်။
စပိန်က ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်၊ ဘာစီလိုနာအသင်းတွေ သိတယ်ဆိုတော့ ခုတော့ ရီးရဲလ်လည်း အရင်လို မကောင်းတော့ဘူးတဲ့။ ပိုက်ဆံမရှိလို့ကစားသမားအသစ်တွေ မဝယ်နိုင်၊ မငှားနိုင်။ နွားရိုင်းသတ်ပွဲမှာ လူ သုံးယောက် သေသွားတယ်တဲ့။ မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်း ရာသီဥတု၊ အစားအသောက်၊ ယဉ်ကျေးမှု ကွဲပြားသလို အတွေးအခေါ် အယူအဆလည်း ကွဲပြားတယ်တဲ့။ စပိန်နိုင်ငံရေးက လာဘ်စားမှုတွေနဲ့သိပ်ရှုပ်ထွေးတယ်၊ အစိုးရက ကောင်းကောင်းမအုပ်ချုပ်တတ်တော့ စီးပွားရေးလည်း မကောင်းဘူး။ အိန်ဂျလာမာကဲလ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ ဂျာမနီဆို စီးပွားရေး သိပ်တောင့်တယ်။ နယူးယောက်ကနေ မက်ဒရစ်ကို ၇ နာရီ လေယာဉ်စီး၊ ပြီးမှ တောင်ဖက် ကာတာဂျီးနားကို လေယာဉ် ၁ နာရီလောက် ထပ်စီးရမှာ။ သူ့ အိမ်နီးချင်းက ကားမောင်းပြီး လာကြိုမှာ။ သူ မရှိတုန်း သူ့ ခွေးကို အဲဒီ အိမ်နီးချင်းကပဲ စောင့်ရှောက်တာတဲ့။ သူတို့ အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကမ္ဘာအနှံ့ က ပင်စင်စားတွေ နေတယ်တဲ့။ တစ်ယောက်ဆို ၉၈ နှစ် တစ်ယောက်တည်း နေကြတာများတယ်။ အရေးအကြောင်းဆို ခလုပ်ကလေး တချက်နှိပ်လိုက်၊ လူနာတင်ယာဉ် ငါးမိနစ်အတွင်း ရောက်လာတယ်။
ဖီလာဒဲဖီးယားနား ရောက်ခါနီးပြီမို့ က အ်ိပ်နေသူတွေကို ဂိုက်က ဖီလာဒဲဖီးယားကို မကြာခင် ရောက်ပါတော့မယ်ပြီး နှိုးတယ်။ ဖီလာဒဲဖီးယားက ဖီလာဒဲဖီးယားကောင်တီ အစိုးရရုံးစိုက်ရာမြို့ ၊ ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်ရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ ၊ ယူအက်စ်မှာ ပဉ္ဇမမြောက် လူဦးရေအထုထပ်ဆုံး၊ လူဦးရေ ၆ သန်းကျော်ကို သယ်ယူပို့ ဆောင်ပေးတဲ့ ယူအက်စ်မှာ ဆဉ္ဇမမြောက်အကြီးဆုံး မက်ထရိုပိုလစ်တန် (မြေအောက်ရထားတွေရှိတဲ့) ဒေသတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၆၈၂ မှာ ဝီလီယမ်ပန် William Penn က ပန်ဆယ်ဗေးနီးယားကောင်တီရဲ့ မြို့ တော်အဖြစ် ဖီလာဒဲပီးယားကို စတည်ခဲ့ပါတယ်။ ဝီလီယမ်ပန်က ဂရိဘာသာစကားနဲ့"philos" (love or friendship) ၊ "adelphos" (brother) ဖီလာဒဲဖီးယားလို့အမည်တွင်စေခဲ့ပါတယ်။ Philly ၊ The city of brotherly love လို့ လည်း နာမည်ပြောင် တွင်ပါတယ်။ ပရောဂျက်မန်နေဂျာက Philly Cheese Steak နာမည်ကြီးတယ် စားဖြစ်အောင်စားခဲ့လို့မှာတယ်။ ၁၇၅၀ ခုနှစ်တွေမှာ ဘောစတွန်ကို သာလွန်ပြီးတော့ ဗြိတိသျှအမေရိကားရဲ့အကြီးဆုံး၊ အစည်ကားဆုံး ဆိပ်ကမ်းမြို့ ၊ လန်ဒန်ပြီးရင် ဗြိတိသျှအင်ပါယာမှာ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်လာပါတယ်။
အမေရိကန်တော်လှန်ရေးကာလမှာ ယူအက်စ်တည်ထောင်တဲ့ ဖခင်ကြီးတွေလို့တင်စားကြတဲ့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေ၊ အမတ်တွေဟာ လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်း Delcaration of Independence (၁၇၇၆) ၊ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ Constitution (၁၇၈၇) တွေကို ဖီလာဒဲဖီးယားမှာ တွေ့ ဆုံလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြတာပါ။ နယူးယောက်ကို မြို့ တော်အဖြစ် တည်ဆောက်ဖို့စိတ်ကူးခဲ့ပေမဲ့ ရေကြောင်းနဲ့လာတိုက်မဲ့ ဗြိတိသျှရန်ကုို စိုးရိမ်ရတာမို့ ဝါရှင်တန်ဒီစီကို မြို့ တော်အဖြစ် အိမ်ဖြူတော်၊ ကယ်ပီတယ်တွေကို တည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာ ဖီလာဒဲဖီးယားက ခေတ္တမြို့ တော်ဖြစ်လာပါတယ်။ ခေတ္တမြို့ တော်ဖြစ်လို့အဆောက်အဦးအသစ်တွေ မဆောက်ဘဲ ရှိတာကိုပဲ ငှားရမ်းသုံးစွဲပါတယ်တဲ့။
လစ်ဘာတီခေါင်းလောင်းကို မလည်ပတ်ရင် ဖီလာဒဲဖီးယားခရီးစဉ်က မပြည့်စုံဘူးလို့ဆိုရမယ်။ ဖီလာဒဲဖီးယားမှာ ကိုယ်တို့ ပထမဆုံး လည်ပတ်တဲ့နေရာက လစ်ဘာတီခေါင်းလောင်းပါ။ ဖီလာဒဲဖီးယားက မေရီလန်းနဲ့ တူတယ်။ တိုက်အမြင့်ကြီးတွေ မရှိဘဲ သစ်ပင်တွေနဲ့စိမ်းစိုတယ်၊ လူလည်း သိပ်မရှုပ်ဘူး။ နယူးယောက်ကနေ ဘတ်စ်ကား ၃ စီးနဲ့ထွက်လာတဲ့ တရုတ်တိုးကားတွေနဲ့ဆုံပြန်တယ်။ ကွိစိကွစိနဲ့လက်ပင်ပံပေါ် ဇရက်အုပ်ကျသလိုပဲ။ လစ်ဘာတီခေါင်းလောင်းကို ကြည့်ဖို့တန်းစီတော့ အိတ်တွေစစ်တယ် လူလည်း တပတ်လှည့်ပြရတယ်။ ဖီလာဒဲဖီးယားရောက်ပြီး ပထမဆုံး ခေါင်းလောင်းတီးလိုက်တာနဲ့အက်ကွဲသွားလို့John Pass ၊ John Stow က ပြုပြင်လို့သူတို့ ရဲ့မိသားစုနာမည်ကို ခေါင်းလောင်းမှာ ရေးထိုးထားတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ဥပဒေကြမ်းတွေကို တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ၊ ပြည်သူတွေ အသိပေးကြေငြာမောင်းခတ်ဖို့ဥပဒေရေးဆွဲသူတွေ၊ ပြည်သူတွေကို ခေါင်းလောင်းတီးပြီး ဆင့်ခေါ်တယ်တဲ့။ ၁၇၇၆ ဂျူလှိုင် ၈ လွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာတမ်း ဖတ်ပြီးတော့ တီးခဲ့ကြတဲ့ ခေါင်းလောင်းတွေထဲက တစ်ခုလို့ယုံကြည်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အထောက်အထား ခိုင်ခိုင်လုံလုံ မရှိဘူး။
National Park Service Ranger is explaining about the history of Independence Hall.
အီတလျံတွေ လက်ထောင်ပါ ( အီတာလျံများ လက်ထောင်ကြသည်) ကျွန်တော့် အဘိုးက အီတာလီမှာ မွေးခဲ့တာပါ။ အီတာလျံတွေသာမက လူကြီးမင်းများအားလုံး Welcome to United States of America။ လွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာတမ်းနဲ့ယူအက်စ်ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွေကို ဒီ Indendence Hall မှာ ငြင်းခုံဆွေးနွေးခဲ့တာပါလို့၁၀ မိနစ်လောက် အမျိုးသားဥယျာဉ်ဝန်ထမ်း National Park Service Ranger က ရှင်းပြပါတယ်။ ဟိုအမြင့်က ထိုင်ခုံပေါ်မှာ ထိုင်တဲ့သူက ဘယ်သူပါလဲ။ ကယ်လီဖိုးနီးယားအဘွားက လက်ထောင်ကာ House Speaker ပါ။ မှန်ပါတယ်တဲ့။ ဟုတ်သားပဲ ရီဘာပလင်ကန်နဲ့ဒီမိုကရက်တွေ ကွန်ဂရက်မှာ ငြင်းခုန်ကြရင် House Speaker ဂျွှန်ဘန်နာ John Boehner တူကြီး တဒုန်းဒုန်းထုတာ တီဗွီမှာ မြင်ဖူးတယ်။ အပေါ်ထပ် အစည်းအဝးခန်းမထဲမှာ ငှက်မွှေးကလောင်တံ၊ ကော်ဇောက စပိန်ပြည်ကလို့ရှင်းပြတော့ စပိန်ဘယ်မြို့ လဲလို့ဂျူလီယာက သွားမေးနေလို့နေရှင်နယ်ပါ့ခ်ဆားဗစ်ရိန်းဂျားခမျာ ခေါင်းကုတ်သွားတယ်။ တခြားအခန်းထဲက ဘုရင်နဲ့ဘုရင်မ ပန်းချီပုံ တွေ့ တယ် အဲဒါဘယ်သူလဲ။ အဲဒါ ပြင်သစ်ဘုရင်နဲ့ ဘုရင်မ။ ဘာလို့ချိတ်ဆွဲထားတာလဲ......နောက်ဆက်တွဲအဖြေကိုတော့ နားမထောင်လိုက်ရဘူး။ ဂိုက်က ထီးလေးမြှောက်ပြပြီး ခေါ်နေလို့ ။
Independence Hall, carpet is from Spain.
ဗိုက်ဆာနေပြီမို့အနီးအနားက တရုတ်ဘူဖေးဆိုင်မှာ သွားစားတော့ ကိုယ်ယူသလောက် အလေးချိန်နဲ့ချိန်တွယ်ပေးရပြီး နေ့ လည်စာကို အမ်းမစ်ခ်ျ Amish တွေဆီမှာ အရသာရှိလှတဲ့ Homemade နေ့ လည်စာ စားမှာမို့ လို့သိပ်အဝမတီးဖို့သတိပေးပါတယ်။ မနေ့ က နယူးဂျာဆီဘုန်းကြီးကျောင်းက အလှုမှာ နင်းကန်စားထားလို့ညနေစာ ဗိုက်မဆာ။ မနက်စာလည်း ဘာမှမစားလာတော့ တော်တော်av; ဝမ်းဟာနေပြီ။ ဂိုက်စကားကို နားမထောင်ဘဲ ဘရန့် ခ်ျ ဖြစ်သွားတယ်။ ယူအက်စ်မှာ မနက်စာချိန်လွန် နေ့ လည်စာ စားချိန်လည်း မကျသေးတာကို Breakfast + Lunch = Brunch လို့ခေါ်ပါတယ်။ ယူအက်စ်က တရုတ်စာတွေကို ချိုပေမဲ့ ဒီတရုတ်စာကတော့ သိပ်မချိူ၊ သိပ်မငန်။ ဗိုက်ဆာလို့ ပဲလားမသိ တော်တော်စားကောင်းတယ်။ ငှက်ပျောသီးကြော် တော်တော်ကောင်းတယ်။
Elfreth's Allery, nation oldest residential street
place to clean the shoe and cellar
Elfreth's Alley လို့နာမည်တွင်တဲ့ ယူအက်စ်မှာ သက်တမ်းအရှည်ဆုံးလမ်းလေးကို ခေါ်သွားတယ်။ အဲဒီလမ်းကြားလေးထဲက အိမ် ၃၂ လုံးက ၁၇၁၈ နဲ့၁၈၃၆ ကြား တည်ဆောက်ခဲ့တာဆိုတော့ နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ရှိပြီဖြစ်သလို နိုင်ငံ့သမိုင်းဝင်အမှတ်အသားပါတဲ့။ ၁၈ ရာစုနှစ်က ပန်းပဲဆရာ၊ အိမ်ပိုင်ရှင် Jeremiah Elfreth အစွဲပြုပြီး လမ်းနာမည် ပေးခဲ့တာပါတဲ့။ အိမ်အဝင်ဝနားမှာ ရွှံ့ ပေနေတဲ့ ဖိနပ်တွေဆေးဖို့တင်တဲ့နေရာ၊ ပစ္စည်းတွေသိုလှောင်တဲ့ Cellar ၊ ပြတင်းပေါက်မှန်အကြည်က လူလာရင် ဘယ်သူလဲဆိုတာ ကြည့်ဖို့ လို့ရှင်းပြပါတယ်။ ဗြိတိသျှအဆက်အနွှယ်တွေမို့အိမ်ကိုလည်း ဗြိတိသျှစတိုင်ဆောက် သူတို့ ဇာတိကို ရောက်နေသလို ခံစားရစေဖို့ တဲ့။ အင်္ဂလန်အလံ လွှင့်ထားလိုက်သေးတယ်။ အင်္ဂလန်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ဂျူလီယာက လန်ဒန်က အိမ်တွေအတိုင်းပဲတဲ့။
ပထမဆုံး အမေရိကန်အလံ ပြုလုပ်တဲ့ ဘက်စီရော့စ် Betsy Ross အိမ်ကို သွားကြတယ်။ ပထမဆုံး အမေရိကန်အလံမှာ ဂရိတ်ဗြိတိန်ဆီကနေခွဲထွက်ပြီး လွတ်လပ်ရေးကြေငြာတဲ့ ဗြိတိသျှကိုလိုနီ ၁၃ နယ်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကြယ် ၁၃ လုံးနဲ့အဖြူအနီ ၁၃ လိုင်း ပါပါတယ်။ ခုလက်ရှိ အမေရိကန်အလံက ဘာမှ သိပ်မပြောင်းပါဘူး။ ကြယ် ၁၃ လုံးအစား ပြည်နယ် ၅၀ ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကြယ် ၅၀ လုံး ဖြစ်သွားတယ်။
lady is posting as Rocky style at Philadephia Museum of Art
Rocky ရုပ်ရှင်ကြောင့် ထင်ရှားတဲ့ ဖီလာဒဲဖီးယားအနုပညာပြတိုက် Philadephia Museum of Art ရှေ့ က လှေကားထစ် ၄၇ ထစ် မရပ်မနားပြေးတက်တာ ကိုယ်တို့ ကားပေါ်က အမေရိကန်သားအဖ။ သမီးဖြစ်သူက တလွှားလွှား ပြေးတက်သွားတာကို အဖေဖြစ်သူက သူ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ မလိုက် အမှီလိုက်နိုင်တာ တွေ့ ရတော့ ဂျူလီယာက ပြေးတက်ချင်ရင် တက်လေ သူက အတက်ဆို အကူအညီ မလိုဘူး အဆင်းမှသာ အကူအညီလိုတာတဲ့။ မပြေးချင်တော့ဘူး နေ့ တိုင်း ရုံးတက်ရုံးဆင်းချိန်တွေမှာ ပြေးလွှားနေရတာ။ ပြတိုက်အပေါ်ကနေ ကြည့်လိုက်ရင် ဂျော့ဝါရှင်တန်ကြေးရုပ်ရှိတဲ့အဝိုင်း၊ တဖြောင့်တည်းလမ်းနဲ့မြို့ ကို စီးမိုးမြင်ရတော့ မြင်ကွင်းက သိပ်ကောင်းလို့မမီးငယ်က ဓာတ်ပုံရိုက်ဖြစ်အောင်ရိုက်လို့မှာတာနဲ့ရိုက်တယ်။
ကိုယ်တို့ လိုပဲ တကိုယ်တော်တိုးရစ်တဲ့ အန်ကယ်ကြီးတစ်ယောက်ကို လှမ်းနှုတ်ဆက်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးတယ်။ ဂျူလီယာ ကင်မရာက ဘက်ထရီကုန်သွားလို့သူ့ ကိုရိုက်ပေးပါ ပြီးရင် စပိန်ကို ပို့ ပေးပါတဲ့။ ပြေးတက်တဲ့ ကလေးမလေးကို ဓာတ်ပုံရိုက်ခိုင်းရတယ်။ ကောင်မလေးနာမည်က ဂျန်နာတဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ သူ့ အပြုံး၊ မျက်နှာလေးမှာ စိတ်နှလုံးကောင်းတွေ လျှံထွက်နေတယ်။ အဆောက်အဦးပေါ်မှ ပန်းပုရုပ်ထုက ခန့် ညားလှပတယ်။ ရှေ့ က ရေပန်းကြီးကြောင့် အပူသက်သာတယ်။ သတ်မှတ်ထားချိန် စုရပ်ပြန်ရောက်တော့ ကားအဲယားကွန်းက အလုပ်မလုပ်လို့နောက်ကားအလာကို မိနစ် ၂၀ လောက် စောင့်ရမယ်တဲ့။ ဂျော့ ဝါရှင်တန်ရုပ်ထုကို ဓာတ်ပုံသွားရိုက်တယ်။ အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးဖခင်၊ ပထမဆုံးသမ္မတ ဂျော့ဝါရှင်တန် အမှတ်တရ ရုပ်တုတွေကို ယူအက်စ် နေရာတော်တော်များများမှာ တွေ့ ရမှာပါ။
မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက် ကြာတော့လည်း ကားကရောက်မလာ ကားကရပေမဲ့ ဒရိုင်ဘာမရှိလို့ တဲ့။ တိုးကုမ္မဏီကို ဖုန်းဆက်၊ တိုးဂိုက်၊ ဒရိုင်ဘာတွေ ခေါင်းချင်းဆိုင် တိုင်ပင်ပြီးတော့ လစ်ဘာတီခေါင်းလောင်းနားမှာ ၁ နာရီလောက် အချိန်ဖြုန်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ဖီလာဒဲဖီးယားစီးတီးဟောကြီးက တကယ်လှတယ်။ အားကစားပေါင်းစုံ ကျင်းပတဲ့ ဖီလာဒဲဖီးယားကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာက ယူအက်စ်မှာ အကြီးဆုံးပါတဲ့။ မြို့ ကြီးတိုင်းမှာ တရုတ်တန်း ရှိပါတယ်။ တရုတ်တန်းတွေရဲ့အနီရောင်မုခ်ဦးကို တရုတ်အစိုးရက အကုန်အကျခံ ဆောက်လုပ်ပေးတာတဲ့။ရော့ ကီးရုပ်ထုကို မတွေ့ ခဲ့ဘူး ဘယ်နားမှာလဲဟင်လို့ဂိုက်ကို သွားမေးတော့ အနုပညာပြတိုက်နားမှာ လူတွေအားလုံး အဲဒီကို သွားကြတာ၊ မင်း မတွေ့ လိုက်တာ I am so sorry လို့ ပြောတော့ ဂိုက်ပြောတာကို သေသေချာချာ နားမထောင်ဘဲ စကားတွေ စွတ်ပြောနေတဲ့သူ မှတ်ပြီးလား။ မနက်က အဝတီးထားတော့ ဗိုက်ကမဆာ၊ ပလာဇာမှာလည်း လူရှုပ်တာနဲ့Independence Hall ရှေ့အိမ်သာနား သစ်ပင်တွေအောက်က ထိုင်ခုံမှာ သွားထုိုင်မယ်ဆိုတော့ ဂျူလီယာက ကောင်းတယ်တဲ့။
တစ်ယောက်တည်းတိုးရစ်တဲ့ အန်ကယ်ကို ဖိတ်ခေါ်တော့ လိုက်မယ်တဲ့။ သူ့ နာမည်က ဘာလာ အိန္ဒိယက ဒေါက်တာ။ သူ့ သားရှိတဲ့နယူးဂျာဆီကို ရောက်နေတာ တလလောက်ရှိပြီ။ ယူအက်စ်ကို အရင်ကလည်း လာလည်ဖူးတယ်။ သူ့ သားက ယူအက်စ်စင်တီဇင်တဲ့။ ကိုယ်က ဘားမားကဆိုတော့ သိတယ်တဲ့ အိမ်နီးနားချင်းတွေပဲ သူ့ အဘိုးက အိန္ဒိယစစ်တပ်မှာ စစ်မူထမ်းတုန်းက မြန်မာပြည်ကို ရောက်ဖူးတယ် မြို့ တော်က Rangoo လေတဲ့။ အိန္ဒိယရွေးကောက်ပွဲမှာ အတိုက်အခံ ဘီဂျေဘီပါတီက အနိုင်ရတယ်နော်လို့ ပြောတော့ ဒီနေ့ တောင် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲရှိတယ်တဲ့။ ဂူဂျာရတ်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တုန်းက ဖြစ်ပွားတဲ့ ဟိန္ဒူမွတ်စလင် အဓိကရိုဏ်းမှာ လူတထောင်လောက် သေဆုံးရတာ သူ့ စနက်မကင်းဘူးလို့သံသယရှိကြပေမဲ့ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် မပြနိုင်ကြဘူး။ လက်ရှိသမ္မတ မန်မိုဟန်ဆင်းက မိုဒီသာ သမ္မတဖြစ်လာရင် အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ် မဲမပေးကြဖို့ဆော်သြပေမဲ့ ဂူဂျာရတ်ပြည်နယ်ကုို စီးပွားရေးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လို့နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ရွေးကောက်ခံရတဲ့ မိုဒီဟာ သူ သမ္မတဖြစ်ရင် အိန္ဒိယနိုင်ငံကို စီးပွားရေးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံရေးမှာ အစဉ်အလာကြီးမားတဲ့ ဂန္ဒီမိသားစုဝင်တွေထက် ဇာတ်နိမ့်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မိုဒီကို ရွေးချယ်လိုက်ပါပြီ။
ခုခေတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေ ဇာတ်နိမ့်ဇာတ်မြင့်ထက် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို လိုချင်တာ။ ရာဂျာတစ်ယောက်သေရင် မယားတွေက မီးပုံထဲခုန်ဆင်းရတဲ့ စနစ်ဟာလည်း အမျိုးသမီးတွေ တောင်းဆိုမှုကြောင့် ပယ်ဖျက်ခဲ့ပါပြီ။ ဟိန္ဒူအယူဝါဒအရ ဂင်္ဂါမြစ်မှာ ရေချိုးရင် အပြစ်တွေ ပယ်ပျောက်ပြီး ကောင်းတဲ့ဘုံ ရောက်တယ်လို့ယုံကြည်ပါသတဲ့။ ဒါကြောင့် သေခါနီးမှာ တခြားဟာတွေထက် ဂင်္ဂါမြစ်ဆီ သွားဖို့ က အဓိကတဲ့။ ဂင်္ဂါမြစ်မှာ ရေစီးနဲ့ မျောနေတဲ့ အလောင်းတွေ တွေ့ နိုင်တယ်။ ခေတ်ပညာတတ် ဘာလာကတော့ မယုံကြည်ဘူးတဲ့။ ဘာလာက အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ဖက် အရင်တုန်းက မက်ဒရပ် Madras ခု ချန်နိုင်း Chennai လို့ နာမည်တွင်တဲ့ မြို့ ကပါ။ အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းက ကျောင်းသားနဲ့တောင်ပိုင်းကကျောင်းသား ဆုံကြရင် ဘုိုလိုပဲ မှုတ်တာမို့ဘယ့်နှယ့်ပါလိမ့်လို့မေးကြည့်တော့ တောင်ပိုင်းသားက တမီးလ်စကားပဲ ပြောတတ်ပြီး ရုံးသုံးစကား စတန်နီစကားကို မပြောတတ်ဘူးတဲ့။ တောင်ပိုင်းသား ဘာလာလည်း ဘာသာစကား ၃ မျိုးတတ်တယ် တမီးလ်ရယ် တခြား ၂ မျိုး၊ အဲ စတန်နီစကားတော့ မပြောတတ်ဘူးတဲ့။ ဒါဆို စင်္ကာပူလာခဲ့ တမီးလ်ကို နိုင်ငံသားဘာသာစကားလို့သတ်မှတ်ပြီး ဘူတာရုံမှာ အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ်၊ မလေး၊ တမီးလ်လို ကြေငြာတယ်။ ဘာလာ စင်္ကာပူကို ရောက်ဖူးပါတယ်တဲ့။
ဂျူလီယာကို ခင်ဗျား အမျိုးသားရောလို့ဘာလာက မေးတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၃ နှစ်လောက်က ညနေစာစားနေရင်း ခေါင်းဇက်ကျိုးပြီး ဆုံးသွားတာတဲ့။ ဆရာဝန် ဘာလာက Heart Attack လားမေးတော့ ဟုတ်တယ်တဲ့။ သူ့ အမျိုးသားဆုံးတုန်းက သူ တော်တော် ခံစားရတာတဲ့။ ခုတော့လည်း နေသားကျပါပြီ။ အိမ်မှာ ခွေးလေးကို အဖော်ပြုလို့တယောက်မျက်နှာ တယောက်ကြည့်။ အချိန်စေ့ပြီမို့စုရပ်သွားတော့ နောက်ထပ် မိနစ် ၂၀ လောက် စောင့်ရဦးမယ်တဲ့။ ဒါဆိုလည်း နဂိုနေရာကို ပြန်ပြီး စကားတွေ ပြောကြပြန်တယ်။ ဂျူလီယာဆွဲကြိုးမှာ လက်ဝါးကပ်တိုင်၊ တူရကီက ဗလီပုံသဏ္ဌန်၊ ဂျူးတွေရဲ့အထိမ်းအမှတ် သုံးခုဆွဲထားတယ်။ ဂျူလီယာက စပိန်ကမို့ဥရောပတော်တော်များများ ရောက်ဖူးတယ်။ ဘာလာက သီရိလင်္ကာ၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ ဆီးရီးယား၊ သြစတေးလျ ရောက်ဖူးတယ်။ ကက်သလစ်တွေက ဗာတီကန်၊ မွတ်စလင်တွေက မက္ကာလိုပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ဗုဒ္ဓဂါယာကို တသက်မှာတခေါက် သွားဖူးချင်ကြတယ်လို့ ပြောတော့ ဘာလာက ဟိန္ဒူအယူအရဆိုရင် ဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့နားရွက်က အသိညာဏ်ပညာနဲ့ ပြည့်စုံတယ် ညဏ်ကြီးတယ်လို့ယူဆတယ်။
တနာရီ အချိန်စေ့လို့ စုရပ်ကိုပြန်သွားတော့ နောက်ထပ် မိနစ် ၂၀ ထပ်စောင့်ပါဦးတဲ့။ ကိုယ့်ဘာသာ တစ်ကုိုယ်တည်းဆိုရင် အတော်ပျင်းစရာ ကောင်းမှာ။ ခုတော့ ဘာလာ၊ ဂျူလီယာတို့ ရဲ့အတွေ့ အကြုံတွေကို နားထောင်ရတာ ပျင်းဖို့ တောင် အချိန်မရှိဘူး။ ဆော်ဒီအာရေဗျမှာ အလုပ်ကိစ္စအတွက် တက္ကစီနဲ့သဲကန္တရာကိုဖြတ်ပြီး ခရီးသွားတော့ ဒရိုင်ဘာက ဘယ်နိုင်ငံကလဲ၊ ဘာလူမျိုးလဲ မေးတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံကဆိုတော့ မွတ်စလင်ဘာသာဝင်လားတဲ့။ မဟုတ်ဘူး ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ဆိုတော့ မွတ်စလင်ဘာသာမဟုတ်ရင် ငါ့ကားပေါ်ဆင်းလို့မောင်းချလို့ကားသွားကားလာပြတ်တဲ့ သဲကန္တာရကားလမ်းမှာ ဖြတ်သွားတဲ့ ကားတစ်စီးတွေ့ ဖို့နှစ်နာရီလောက် လမ်းလျှောက်လိုက်ရတယ်ဆိုပဲ။ ဟင်...။
ကလေးမမွေးနိုင်လို့သွေးသွန်ပြီး ရောက်လာတဲ့ လူနာအမျိုးသမီးက ရှားပါးတဲ့ သွေးအုပ်စုပိုင်ရှင်။ သွေးလိုလို့အလှုရှင်ရှာတော့ သွေးအုပ်စုတူတဲ့ အလှုရှင် ၄ ယောက် ရတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက အလှုရှင်နာမည်တွေကြည့်ပြီး မွတ်စလင်ဘာသာဝင် မဟုတ်ဘူး ထင်တယ်။ မွတ်စလင်ဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့ သူတွေရဲ့သွေးတွေကို ကျွန်တော့်မိန်းမ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ မထည့်နိုင်ဘူး Let my wife die. ။ သူ့ မှာ မယားလေးယောက်ရှိတော့ တစ်ယောက်သေသွားလည်း ဘာအရေးတုန်း။ အို မိုင်ဂါ့ ...( ဂျူလီယာနဲ့ကိုယ်) ။ မကြာခင်က ဆီးရီးယားမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်တော့ သူတာဝန်ကျနေတဲ့ ဆေးရုံကို နေတိုးက ဗုံးကျဲလို့ ဗုံးခိုကျင်းမှာ နေရတယ်။ အစိုးရဖက်က ပစ်မလား၊ သူပုန်က ပစ်မလားနဲ့အချိန်မရွေး သေနိုင်တယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ အကုန်ဆုံးလို့သူ စီးလာတဲ့ကားကို သူပုန်က ကားပေါ်ကဆင်း မဆင်းရင် ပစ်ထည့်လိုက်မယ် သော့ပေးတဲ့။ ဒီလိုမျိုးတွေကြောင့် သူ့ အလုပ်က တွင်တွင်ခေါ်ပေမဲ့ Middle East ဆိုရင် လုံးဝမသွားဘူးတဲ့။
မိနစ် ၂၀ အချိန်စေ့ပြီမို့စုရပ်ကိုသွားတော့ ကားရောက်လာပါပြီ။ အမ်းမစ်ခ်ျ Amish လူမျိုးတွေနေတဲ့ လန်ကက်စတာကောင်တီ Lancaster County ကို ၁ နာရီခွဲလောက် မောင်းရတယ်။ စိမ်းစိုနေတဲ့ တောတောင်တွေ၊ စိုက်ပျိုးဖို့ ထွန်ယက်နေတဲ့ လယ်ယာတောတွေ၊ မြစ်ချောင်းတွေနဲ့ရှုခင်းက အင်မတန် သာယာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလေးလံလုံးမျက်ခွံကို ပေါ့သွားအောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူး။ အမ်းမစ်ခ်ျတွေဆီ ရောက်ခါနီးတော့မှ ဂိုက်က ဆွစ်အဆက်အနွယ်ဖြစ်ပြီး ဘာသာရေးအကွဲအပြဲမှာ လွတ်လပ်ချင်လို့Freedom တိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့ ယူအက်စ်ကို အခြေချလာရောက်တဲ့ Jakob Amman နောက်လိုက်တွေကို အမ်းမစ်ခ်ျတွေလို့ခေါ်ပါသတဲ့။ အမ်းမစ်ခ်ျတွေဟာ အပွင့်အခက်အစက်တွေ မပါတဲ့ အင်္ကျီပြောင်ဝတ်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ မော်တော်ကား၊ တယ်လီဖုန်း မသုံးဘဲ ရိုးရိုးစင်းစင်း နေထိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့ စကားကို Pennsylvania Dutch လို့ခေါ်ပေမဲ့ တကယ်က ဆွစ်ဂျာမန်စကားပါတဲ့။
The Witness ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကို အမ်းမစ်ခ်ျကလေးက မျက်မြင်သက်သေမို့မင်းသားကြီး ဟယ်ရီဆင်ဖို့ က အမ်းမစ်ခ်ျရွာကိုလာ ကလေးကို မေးမြန်း။ ဖုန်းဆက်ဖို့တယ်လီဖုန်းမရှိလို့အနီးအနားကရွာမှာ သွားဆက်ရတယ်လို့ဂျူလီယာက ပြောပြတယ်။ မကြာပါဘူး ဂိုက်က The Witness ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖူးလား ဟယ်ရီဆင်ဖို့ လ် အမ်းမစ်ခ်ျရွာမှာ ဖုန်းမရှိလို့အနီးကရွာမှာ သွားဆက်ရတယ်လေ မှတ်မိကြပါသလားလို့ပြောတော့တာပဲ။ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ရာမှာ မြင်းကို သုံးပြီး သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးအတွက် ဘက်ဂီ Buggy လို့ ခေါ်တဲ့ မြင်းလှည်းသုံးပါတယ်။ အမ်းမစ်ခ်ျရွာတပတ်ကို အမ်းမစ်ခ်ျမောင်းတဲ့ ဘက်ဂီမြင်းလှည်း စီးကြတယ်။
လယ်ယာသုံးမဟုတ်ဘဲ ကတ္တရာလမ်းတွေမှာ သုံးတဲ့မြင်းမို့ ခွာတပ်ပေးထားတာ။ ကလေးတွေက မေးကြတယ် မြင်းမတွေ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်မစီးဘူးလားတဲ့။ ဟား...ဟား..။ အမ်းမစ်ခ်ျတွေ ဘဝက ရိုးစင်းပါတယ်။ အနီးအနားက ကျောင်းတွေမှာ ၁၅ နှစ်အထိပဲ ကျောင်းတက်တယ်။ ဒီမှာ လာနေလို့အမ်းမစ်ခ်ျ မဖြစ်ပါဘူးတဲ့။ အမ်းမစ်ခ်ျမိသားစုမှာ မွေးဖွားမှ အမ်းမစ်ခ်ျ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ အမ်းမစ်ခ်ျ အမျိုးသားတွေက မုတ်ဆိတ်မွေးထား၊ ခေါင်းမှာ ဦးထုပ်ဆောင်း၊ အပေါ်က waist coast တထပ်၊ ဘောင်းဘီကြိုးသိုင်း ဝတ်ကြတယ်။ အမျိုးသမီးတွေက ခေါင်းမှာ အဖြူရောင်အုပ်ဆောင်း ပလိန်းဂါဝန် ဝတ်ကြတယ်။ ကြက်တွေကိုလည်း လှောင်အိမ်ထဲမှာ မဟုတ်ဘဲ သဘာဝအတိုင်း လွှတ်ထားတယ်။
နွားနို့ ညှစ်တာကို ရှင်းပြပေမဲ့ နားမလည်လိုက်ဘူး။ အမ်းမစ်ခ်ျတွေဟာ ပစ္စည်းမက်တဲ့ Materialistic တွေ မဟုတ်ဘူး။ အလုပ်ကြိုးစားကြတယ် လောဘနည်းတယ်။ စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းလာလို့ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေကို ဖိတ်ခေါ် လာလည်တဲ့သူတွေကို ဘာဂီမောင်းပို့ ၊ အစားအသောက်တွေ ရောင်းပြီး တဖက်တလမ်းက ဝင်ငွေရှာကြတယ်။ ဂိုက်က ကလေးတွေ အိမ်လုပ်ကွတ်ကီး လာရောင်းလိမ့်မယ် ဝယ်ချင်လည်းဝယ် သဘောပေါ့။ ကွတ်ကီး ၃ ခုကို တကျပ်၊ လီမွန်နိတ် ၂ ကျပ် အားပေးလိုက်တယ်။ လီမွန်နိတ်က မဆိုးပေမဲ့ ကွတ်ကီးကတော့ စားမကောင်းဘူး။ No TV ၊ No Video Games ဆိုပေမဲ့ ခုခေတ်ကလေးတွေက မိဘတွေ မသိအောင် တယ်လီဖုန်း ကိုင်ကြတယ်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမရှိတော့ ဆိုလာနေရောင်ခြည်သုံးပြီး အားသွင်းတယ်။ မိဘတွေသိရင် ရိုက်ခွဲ ဘုရားကျောင်းက အပြစ်ပေးတယ်တဲ့။
Amish boy is working at the farm
လယ်ကွင်းဆီကနေ ပျံ့ လွင့်လာတဲ့ မိုင်လီဆိုင်ရပ်၊ လေဒီဂါဂါသီချင်းတွေကြားရင် အဲဒါ ကလေးတွေလို့ သာ မှတ်လိုက်ပါတဲ့။ တခုခု အပြစ်လုပ်မိရင် ဘုရားကျောင်း၊ အသိုင်းအဝန်းကနေ ပစ်ပယ်လေ့ရှိတယ်။ အမ်းမစ်ခ်ျတွေဘဝမှာ လယ်ယာ၊ မိသားစု၊ ဆွေမျိုး၊ ဘာသာတရားက အရေးပါတယ်။ ခေတ်ပေါ်ပစ္စည်းတွေ မသုံးလို့မိသားစုအပေါ် အာရုံအပြည့် စိုက်နိုင်တာလားလို့ ။ ခုခေတ်လူတွေကတော့ (ကိုယ်တိုင်အပါအဝင်) ဖုန်းလေး တပွတ်ပွတ်၊ အပြင်မှာထက် ဖေ့ဘွတ်တို့ လို ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ တွေ့ ဆုံတာ ပုိုများနေသလားလို့ ။ အချိန်၊ လုပ်အားသက်သာအောင် မို်က်ခရိုဝေ့စ်၊ အဝတ်လျှော်စက်၊ ရယ်ဒီမိတ်တွေ သုံးပေမဲ့ အရင်ခေတ်က လူတွေလောက် အချိန်ပို မရှိသလားလို့ ။ ဘာဂီတပတ်စီးပြီးတော့ ဂိုက်က တစ်ဖ်ပေးဖို့ရီကွက်လုပ်ထားတော့ အားလုံးတစ်ဖ်ပေးကြတယ်။
ညနေ ၄ နာရီ Kitchen Ketlle Village မှာ ညစာစားတော့ ဂိုက်က soup အရမ်းကောင်းတယ်လို့ညွှန်းတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမဲသားစွပ်ပြုတ် Vegetable Beef Soup နဲ့ကြက်သားဆင်းဒွစ်ခ်ျ Chicken Salad Sandwich ၊ ချိစ်ကိတ်၊ အနုပညာပြတိုက်မှာ ရေခဲမုန့် ဝယ်ကျွှေးတဲ့ ဂျူလီယာအတွက် Pie မှာလိုက်တယ်။ အိုးမိုင်းဂါ့ စွပ်ပြုတ်က ကောင်းလိုက်တာ စားဖူးသမျှထဲမှာ ဒီစွပ်ပြုတ် အကောင်းဆုံး။ ဓာတ်ပုံမရိုက်ဘဲ မနေနုိုင်အောင်ကို ကောင်းတယ်။ ဘာလာက အမဲသားစွပ်ပြုတ်စားတယ်ဆိုလို့အံ့သြလို့ ။ သူ့ အမျိုးသမီးက မစားဘူး သူက စားတယ်တဲ့။ ဆူနမ်တို့ နဲ့ သွားစားရင် ကိုယ်က အမဲသားစားလို့ ကတော့ သူတို့ ပန်းကန်ကို အရင်လိုနှိုက်ခွင့် မပေးဘူး နင် အမဲသားစားတာ ငါတို့ ပန်းကန်ကို မထိနဲ့ တဲ့။
The best vegetable beef soup I had ever had
ဂျူလီယာက ရောက်တဲ့အရပ်က အမှတ်တရ မက်ကနစ် ဝယ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာမှာ ကပ်ထားတယ်တဲ့။ သူ မက်ကနစ် ရှာပုံတော်ဖွင့်ချိန်မှာ ကိုယ်နဲ့ ဘာလာက မုန့် ဆိုင်ထဲဝင်ပြီး မြည်းစမ်းတာ ကောင်းလွန်းလို့ဝယ်ဖို့ ခြင်းတောင်း ဆွဲတော့တာပဲ။ ဘာလာက ငါတို့ ဆိုင်မှာစားတာ မှားတယ်ကွ ဒီမှာ လာစားရမှာလို့နောက်တယ်။ မမီးငယ်က အမ်းမစ်ခ်ျတွေလုပ်တဲ့ နို့ ခဲ တအားစားကောင်းတာ ဝယ်ခဲ့လို့ မှာတော့ သွားရှာတာ မတွေ့ ဘူး။ Peach Salsa ၊ Rasberry Jam နဲ့ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် Salsa သုံးဘူး ဝယ်လာတယ်။ Salsa တွေက အာလူးကြော်တို့ နဲ့စားရတာ။ အမ်းမစ်ခ်ျတွေက ပြင်ပကမ္ဘာကြီးနဲ့မထိတွေ့ တော့ ရိုးသားတဲ့ပုံက အထင်းသား ပေါ်နေတယ်။ လူတွေက ဝတ်တာ၊ နေတာထိုင်တာ ရိုးရိုးကြီး အစားအသောက်ကတော့ ထိပ်တန်းဗျို့ ။ အမ်းမစ်ခ်ျစာတွေကို အကြိုက်တွေ့ သွားလို့ရှာဖွေကြည့်တော့ အွန်လိုင်းကနေ မှာလို့ ရတယ်တဲ့။ သတင်းကောင်းပဲ။
မုန့် တွေ မြည်းနေတုန်း အန်ကယ်ကြီးတစ်ယောက်က ကင်မရာ ဘယ်က ဝယ်တာလဲလို့လာမေးတယ်။ တုတ်ကောက်နဲ့ မို့ဂျူလီယာက ကူတွဲပေးရမလားလို့သွားမေးတာ နိုးလို့အပြတ်ငြင်းလိုက်တဲ့ အဘိုးကြီး။ ယောက်ျားလေးတွေက မိန်းကလေးတွေကို ကူတွဲပေးချင်တာ မိန်းကလေးက ကူတွဲပေးမယ်ဆိုရင် ယောကျာ်းလေးက လက်မခံချင်ဘူး။ ကင်နွန်ဆိုက်က ဝယ်တာလို့ ဖြေတော့ ဘယ်လောက်လဲလို့မေးတယ်။ Black Swan ရုပ်ရှင်ကို ဒီကင်မရာနဲ့ရိုက်တာလို့ဆိုကြတယ်။ ခုမှ ဈေးကြီးတာ ဝယ်တာ နောင်တရတယ် ဒီကင်မရာကနေ ပိုက်ဆံထွက်လာတာလဲမဟုတ်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လည်းမဟုတ် ဈေးသင့်တာပဲ ဝယ်သင့်တာလို့နောင်တစကားဆိုတော့ သူက ငါ့မှာသာ အချိန်နဲ့ပိုက်ဆံရှိရင် ဝယ်တယ်တဲ့။ သူက ဘရာဇီးကတဲ့ သူက အပျော်ရိုက်၊ သူ့ သားက ပရော်ဖက်ရှင်နယ်။ ကားဆီအသွား လမ်းမှာပြန်တွေ့ တော့ မစ် ကင်မရာကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပါစေတဲ့ (ဟင် လူကိုယ်တော့ မရိုက်ဘူး) ။ ဘရာဇီးအသင်း ကမ္ဘာ့ဖလား ဗိုလ်စွဲပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတော့ အင်း အဲဒီမှာ ပြသနာတွေ ရှိနေတယ် ပေးတဲ့ဆု တလုံးတဝတည်း ပြည့်ပါစေတဲ့။
Amish family is working at the farm. Amish woman is riding the cart and man is collecting the hail for the winter.
Child is sitting near the heap of hail and family dog is also working together.
အမ်းမစ်ခ်ျတွေ အမ်းမစ်ခ်ျ မဟုတ်တဲ့သူ အားလုံးကို အင်္ဂလိပ်လို့ခေါ်သတဲ့။ မြန်မာတွေ နိုင်ငံခြားသားကို ကုလားဖြူ၊ ကုလားမဲ ခေါ်သလိုပေါ့။ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းက ဆရာပြောပြတာ သတိရမိတယ်။ မြန်မာတွေက မသိရင် ဓာတ်တပ်ပြီး ခေါ်လိုက်တာပဲတဲ့။ ဘာမှန်းမသိတဲ့အလုံးကို ဓာတ်လုံး၊ အပြားကို ဓာတ်ပြား၊ စက်ကို ဓာတ်စက်၊ ဓာတ်ရှင်၊ ဓာတ်ခဲ။ ၂ နာရီလောက် ကားစောင့်ရတာကို နှစ်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့ဂိုက်က ရေခဲမုန့် ကျွှေးတယ်။ အမ်းမစ်ခ်ျမလေးရောင်းတဲ့ အိမ်လုပ်ရေခဲမုန့် က စားကောင်းတယ်။ ဂျူလီယာက ဘက်ကီမက်ကနစ် လက်ဆောင်ပေးတယ်။ သူ့ လိပ်စာ ရေးပေးတယ် ဓာတ်ပုံတွေကို စာတိုက်နဲ့ထည့်ပေးဖို့ ။ ဥရောပကို လာလည်ခဲ့ရင် သူ့ ဆီလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်။ ကိုယ် ဥရောပကို သွားလည်တဲ့အချိန်ထိ ဂျူလီယာ အသက်ရှင်နေပါ့ဦးမလား။ ဂျူလီယာ၊ ဘာလာတို့ နဲ့နောက်ထပ်ဆုံတွေ့ ပါဦးမလား။ မမ်မိုရီယမ်ဒေးပိတ်ရက် ခရီးသွားကြတဲ့ နယူးယောက်သားတွေ နယူးယောက်ကို ပြန်လာပြီမို့ကားလမ်းတွေ ကျပ်နေပါပြီ။ လင်ကွန်းတန်နယ်ဝင်ခါနီးမှာ ဂိုက်က ကင်မရာတွေ အသင့်ပြင် မက်ဟန်တန်ညအလှကို ရိုက်ကြမယ်လို့ဆိုတာနဲ့ကင်မရာမီးတွေ တဖျပ်ဖျပ်ပွင့်သွားတယ်။ နယူယောက်သီချင်းကို နားဆင်ပြီး နယူးယောက်ကို ပြန်ရောက်လာပါပြီ။ တစ်ဖ်ကိုပဲ ခံစားခွင့်ရှိတာမို့တစ်ဖ်ပေးဖို့ဂိုက်က ရီကွက်လုပ်တဲ့အခါ အားလုံးက တစ်ဖ်ပေးကြပါတယ်။
Amish Costumes credit to google
Amish style Bike Scooter
There is no electricity, TV, video games and telephone. So Amish people wash the clothes by hand and hung under the sun like my hometown. It had been nearly six years I don't see this scene. It reminds me of my hometown
Julia, 80 years old from Spain and Bala, 70+ years old from India, doctor.
God will know when we will meet again.
ဂိုက်က အတော်ဝန်ဆောင်မှုကောင်းတယ်။ သိသင့်သိထိုက်တာတွေ၊ အကြံညဏ်တွေ ပေးပါတယ်။ ခရီးသည်တွေကို ဂရုတစိုက် ရှိတယ်။ ၄၅ ယောက်ကို တစုတစည်း ထိန်းကျောင်းဖို့ ဆိုတာ အတော်မလွယ်။ သတ်မှတ်ချိန်ထက် နောက်ကျပြီးမှ ရောက်တတ်တဲ့သူ၊ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ မေးခွန်းမေးတဲ့သူ၊ ကွန်ပလိမ်းတဲ့သူ လူအမျိုးမျိုးကို အဆင်ပြေအောင် ညှိနှိုင်းရတာ။ သူတို့ ကုမ္မဏီကနေ ဘော့စတွန်၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီ၊ နိုင်အာဂရာရေတံခွန်တိုးတွေ ရှိပါတယ်လို့ကြေငြာတယ်။ ခရီးသည်တွေက အဖြူများတယ်။ အာရှသားဆိုလို့ကိုယ်နဲ့ဘာလာ နှစ်ယောက်တည်း။ ဈေးလည်း နည်းနည်းကြီးတယ်။ ဂျူလှိုင် ၄ ပိတ်ရက် ရှိသေးတာမို့ရှာဖွေတော့ တရုတ်တိုးတွေကို သွားတွေ့ တယ်။ ဈေးသက်သာသလို လိုချင်တဲ့ ရက်တွေထွက်တယ်။ နောက်ဆို ကျလစ် ကျလစ် လက်ပံပင်ပေါ်ဇရက်ကျတဲ့ ပေါက်ဖောက်တိုးကားတွေနဲ့ခရီးသွားဖြစ်မလားဘဲ။
ဇွန် ၃၊ ၂၀၁၃။
Viator : Philadephia and Amish Country Day Trip from New York
Reference : Google
All About NYC - 3
All About NYC - 2